“ အီဒုလ်ဖိသွိရ်ပွဲတော်နေ့ ” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မွတ်စ်လင်မ်လူထုကြီးတစ်ရပ်လုံးသည် နှစ်စဉ်နှင့်အမျှ ရမဒွါန်လမြတ်တွင် တစ်လတိတိ ဆွိယာမ် ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်ကြတယ်။ တစ်လတိတိ ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်ပြီးသည့်နောက် ရှောင်ဝါလ်လဆန်း(၁)ရက်နေ့တွင် အီဒုလ်ဖိသွိရ် ပွဲတော်ကြီးကို တပျော်တပါး ဆင်ယင်ကျင်းပကြတယ်။
အီးဒ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အဖန်တလဲလဲ ပြန်လာခြင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်စဉ်နဲ့အမျှ အဖန်တလဲလဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဆင်နွှဲသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး အီးဒ်နေ့လို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများသည် လူမျိုးတိုင်း၊ ဘာသာတိုင်းလိုလိုမှာပင် ရှိကြပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာ မထွန်းကားမီခေတ်တွင် အာရေဗျလူမျိုးများတွင်လည်း ၄င်းတို့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပျော်ရွှင်ရန်အတွက် ရက် ၂ ရက် သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၄င်းတို့ဟာ ထိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများတွင် ရိုးရိုးပျော်ရွှင်မှုများသာမက အပျော်ကျူးပြီး မဖွယ်မရာကိစ္စတွေ၊ ရိုင်းပြသော အပြုအမူတွေ၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ အလွန်အကျွံ ပါဝင်နေခဲ့တယ်။ ဒီကဲ့သို့ တရားမဲ့ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေတာကို တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင် တွေ့မြင်သည့်အခါ ပျော်ရွှင်မှုလည်းပါ၊ လူထုမှာလည်း အကျိုးရှိ၊ သဘာဝလည်းကျ၊ ချစ်ကြည်ရေးလည်းရ၊ အစ္စလာမ်ဝါဒလည်းပြန့်၍ တကယ့်လူထု အင်အားပြနိုင်ရန် အလို့ငှာ ယခင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပျော်ရွှင်ရန်အတွက် ထိုနှစ်ရက်အစား အခြားနှစ်ရက်ကို သတ်မှတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ပထမရက်ကို (အီဒုလ်ဖိသွိရ်)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယရက်ကို (အီဒုလ်အဒ်ွဟာ)လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မွတ်စ်လင်မ်များသည် တရားတော်နှင့်အညီ တစ်လတိတိ ဆွိယာမ် ဥပုသ်ဆောက်တည်နိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းသာခြင်း၊ အရှင်မြတ်အား ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ဥပုသ်ဆောက်တည်ရာတွင် အငတ်ပြဿနာနှင့် အမြဲတန်း ရင်ဆိုင်နေရသော ဆင်းရဲသားများ၏ ဒုက္ခတွေကို လက်တွေ့သိရှိလာပြီး ဆင်းရဲသား ကျောမွဲများအား ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းများကို အကြောင်းပြုပြီး ပထမအီးဒ်ဖြစ်သော (အီဒုလ်ဖိသွိရ်)ကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီဒုလ်ဖိသွိရ်ပွဲတော်နေ့မှာ မွတ်စ်လင်မ်များဟာ တရားတော်နှင့်အညီ “ ဖိသ်ွသွရဟ် ”အလှူဒါနကို ဆင်းရဲသူ၊ ဆင်းရဲသားတို့အား ပေးလှူကြရပါတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဟာ ဖိသ်ွသွရဟ်အလှူကြေးကို မိမိအတွက်လည်း ပေးရပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဇနီးနှင့် သမီး၊ သားများအတွက်လည်း ပေးရပါတယ်။ ဖိသ်ွသွရဟ်ပေးလှူရန် တာဝန်ရှိတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဟာ အကယ်၍ ဖိသ်ွသွရဟ် မပေးလှူလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သူရဲ့ ဥပုသ်ဆောက်တည်မှုကို လက်ခံတော်မူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ အီးဒ်ပွဲတော်မကျင်းပမီ ဆင်းရဲသူ၊ ဆင်းရဲသားတို့အား “ ဖိသ်ွသွရဟ် ”ပေးလှူကြပါတယ်။ ဒီလို “ ဖိသ်ွသွရဟ် ”ပေးလှူကြခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ဒီအီးဒ်ပွဲတော်ကို “ အီဒုလ်ဖိသွိရ် ”တစ်နည်း “ ဖိသ်ွသွရဟ် ” ပွဲတော်လို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီလို ဖိသ်ွသွရဟ်ပေးလှူခြင်းကြောင့် အီးဒ်ပွဲတော်မှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မျက်နှာငယ်ရသူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မပါဝင်လိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးဟာ ပေါ်ပေါက်စရာအကြောင်း မရှိတော့တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်မှာ ကုံလုံကြွယ်ဝတဲ့လူရော၊ မရှိဆင်းရဲတဲ့လူရော၊ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းစောင်းမကျန် ဆိုသလို မွတ်စ်လင်မ်တစ်မျိုးသားလုံးဟာ ပါဝင်ဆင်နွှဲ နိုင်ကြပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီပွဲတော်ဟာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ လူတန်းစားမခွဲ၊ သူတော်စင်မှန်သမျှ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ “ သူတော်စင်တို့ရဲ့ အောင်ပွဲကြီးပဲ” ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်စ်လင်မ်တွေ ပထမအီးဒ်ပွဲတော်ကို ဘယ်လိုများ ကျင်းပကြပါလိမ့်?
အီးဒ်နေ့ မိုးလင်းသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် မွတ်စ်လင်မ်များသည် အယုတ် အလတ် အမြတ် မရွေး၊ ကြီးငယ်မဟူ၊ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းစောင်းမကျန် လူထုကြီးတစ်ရပ်လုံးသည် ရေမိုးချိုးကြတယ်။ အဝတ်ကောင်း ဝတ်ကြတယ်။ အမွှေးအကြိုင်များ လိမ်းကြတယ်။ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးဖြင့် နိစ္စထာဝရ မဟာကာရုဏိက ဖြစ်တော်မူထသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဂုဏ်တော်များကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ကာ (မုဆွလ္လာ)ခေါ် လူထုဝတ်ပြုရာဌာနသို့ တပျော်တပါး သွားကြတယ်။ ဓနရှင်နဲ့ ဆင်းရဲသား၊ သမ္မတနဲ့ သူတောင်းစား၊ ဖြူနက်မခြား၊ လူတန်းစားမခွဲဘဲ နေထားကျကျ အတန်းများစီကြတယ်။ အရှင့်ကျောင်းတော် (ကအ်ဗာဟ်)ဘက်သို့ မျက်နှာမူ၍ တစ်ဦးတည်းသော ရှေ့ဆောင်ဆရာတော်ရဲ့ နောက်မှနေ၍ တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူထသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား တညီတညွတ်တည်း၊ တစ်စိတ်တစ်လက်တည်း၊ တစ်သဘောတည်း၊ တစ်မျိုးတစ်စားတည်း ခဝပ်ကိုးကွယ် ဝတ်ပြုကြတယ်။ ဒီကဲ့သို့ တပျော်တပါး ခန့်ခန့်ညားညား ဝတ်ပြုပြီးသည့်နောက် မွန်မြတ်သော တရားဒေသနာများကို နာကြားကြရပါတယ်။
“ အလ္လာဟုအတ်က်ဗရ်၊ အလ္လာဟုအတ်က်ဗရ်၊ လားအီလားဟ အိလ္လလ္လာဟု ဝလ္လာဟုအတ်က်ဗရ်၊ အလ္လာဟုအတ်က်ဗရ်၊ ဝလိလ္လာဟိလ်ဟမ်ဒ်”
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အဒုတိယော၊ အသမာသမော၊ အတုလော၊ အပမေယျော၊ သဿတော အစရှိသည့် အနန္တော အနန္တ တန်ခိုးတော်၊ ဂုဏ်တော်များနှင့် ပြည့်စုံတော်မူထသောအရှင် ဖြစ်တော်မူပါ၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံထိုက်သောအရာဟူ၍ လုံးဝဘာမှမရှိ။ အထူးထူး အထွေထွေသော ချီးမွမ်းထောပနာခြင်းများကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာလျင် ခံထိုက်တော်မူ၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တော်မူသော မုဟမ္မဒ်သခင်အပေါ် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ မေတ္တာများ ပို့သကြပါ၏။
ဒီနေ့ ဒီရက်ဟာ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ သူမွန်သူမြတ်များအဖို့တော့ ပျော်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသူတော်များအဖို့မှာတော့ ငိုပွဲကြီးတမျှ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြင်မည်သူမဆို လမြတ်ရမဒွါန်၏ ဆွိယာမ် – ဥပုသ်များကို စောင့်ထိန်း၏။ အီဒ်ဆွလာသ်ကို ဝတ်ပြု၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသူ၏ အပြစ်များကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုတော်မူ၏။ ထိုသူ၏ မကောင်းမှုများကို ကောင်းမှုဖြင့် အစားပေးသနားတော်မူမည်။
ဒီလောကကြီးဟာ အရိပ်ပမာ ပျောက်ကွယ်သွားမည့် သင်္ခါရ လောကမျှဖြစ်ပါတယ်။ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း တရားကို အမြဲတစေ သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။ မနှစ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ ဥပုသ်ဆောက်တည်ကြပြီး အီးဒ်ပွဲတော် ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ မိဘတွေ၊ သားသမီးတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးတို့ဟာ ယခု အပြည့်အစုံရှိကောင်းမှ ရှိကြတော့မည်။ အချို့သေဆုံးသွားခဲ့ကြပြီ။
ယခုကဲ့သို့ အေးအေးဆေးဆေး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အီးဒ်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြသည့်အတွက် အရှင်မြတ်အား အထူးကျေးဇူးတင်ကြပါ။ အထူး ခယရိုကျိုး ဝတ်ပြုဆုတောင်းကြပါ။
မိမိတို့နှင့် အဖက်ဖက်မှ ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဆင်းရဲသားလူထုအား တရားတော်နှင့်အညီ မိမိတို့၏ ချွေးနှဲစာများကို ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းကြပါ။ ခပ်သိမ်းကုန်သော ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည် အရှင့်အိမ်တော်သားများဖြစ်ကြပါတယ်။ အိမ်တော်သား အချင်းချင်း လစ်လျူပြု မထားကြပါနဲ့။ ကူညီယိုင်းပင်းကြပါ။ ချစ်ခင်ကြပါ။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မေတ္တာလက်ဆောင် ကမ်းလှမ်းကြပါ။
မိမိတို့၏ အဝတ်အစားမျာကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လှလှပပ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြုလုပ်ကြသလို မိမိတို့၏ အတွင်းစိတ်ဓာတ်များကိုလည်း တကယ်တမ်း သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ကြပါ။
တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်သခင်က မိန့်မှာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အီးဒ်နေ့များတွင် ဆွိယာမ်ဥပုသ်မစောင့်ထိန်းရ။ အီးဒ်နေ့ဟာ စားဖို့သောက်ဖို့၊ အိမ်သူအိမ်သားများနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေကြဖို့ဖြစ်တယ်။
မွန်မြတ်သော တရားဒေသနာများကို နာကြားကြပြီးနောက် အရှင်မြတ်အထံတော်၌ ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းဆိုကြပြီး အချင်းချင်း ဖက်လဲတကင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ကြကာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အီးဒ်နေ့သည် –
၁။ အရှင့်အား ခဝပ်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုတဲ့နေ့
၂။ အရှင့်အား ကျေးဇူးတင်တဲ့နေ့
၇။ လူထုမေတ္တာ ကမ်းလှမ်းတဲ့နေ့ ….. ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အလွန်ထင်ရှားလှပါတယ်။
လူထုအပေါင်း ဘေးဘယာဝေးကွာ စိတ်ကြည်ကိုယ်ချမ်း ရွှင်လန်းသာယာကြပါစေကုန်သတည်း။
(သီရိပျံချီ အလ်ဟာဂ်ျ အလ္လာမဟ် ဃာဇီမုဟမ္မဒ်ဟာရှင်မ်)
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ သာသနာ့စာစဉ် (၂၃) ဃာဇီ၏အသံ စာအုပ်မှ စုစည်းတင်ပြပါသည်။
This entry was posted on August 4, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Myanmar’s Rohingya Muslims flee to Australia	First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထား ခြင်း →